Voasivana Ao Madagasikara, Mamiratra Any Eoropa Ilay Tarika Mpiangaly Gadona Rock-mpanoherana “The Dizzy Brains” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2016 7:41 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Français
Pikantsary tamin'ny fandaharan'ny Petit Journal tao amin'ny CANAL+ ny 14/04/2016 niarahana tamin'ireo Malagasy mpiangaly rock, The Dizzy Brains.
Vondrona iray misy tanora Malagasy 4 mafiloha ny “The Dizzy Brains”, izay tsy mitsahatra ny mahazo fankatoavana miaraka amin'ny fombany azy ireo manokana, ao anaty gadona “punk / garage rock“. Ry Andrianarisoa miarahalahy no eo amin'ny feo sy ny gitara beso, Poun amin'ny gitara ary Mirana eo amin'ny amponga.
Fantatra amin'ny fipelipelehany eny an-tsehatra, nanamarika ireo frantsay mpanaraka ny fandaharana anaty fahitalavitra Petit Journal tamin'ny 14 Aprily lasa teo ny fisehoan'ny The Dizzy Brains tao. Nihantsy mivantana ny praiminisitra malagasy vaovao araka izany i Eddy teny anaty tambajotra sosialy, taminà hafatra iray nanakoako hoe : « Ataovy ny asan'ialahy letsy bandy e ! ». Miady tsara amin'ny toetra ahafantarana ilay tarika eo amin'ny sehatry ny mozika io fanehoankevitra tsy nomanina sy mifanaraka tsara amin'ny vanim-potoana io, fanakianana ary mivantambantana. Ampahany amin'ilay lahatsary :
Mba hahafantarana tsara ity tarika mampientanentana fatratra ity, ireto misy zavatra 3 tena manamarika notsongaina tamin'ny vanim-potoana nisiany, fohy nefa niavaka :
(2011) Nahaterahan'ny tarika :
Tamin'ny 2011 i Eddy sy Mahefa Andrianarisoa no nanangana ny tarika, ka Eddy teo amin'ny feo ary Mahefa gitara beso. Avy amin'ny rain'izy ireo ny fitiavany mozika rock, mpanfaky fatratra ny tarika Punk/Rock anglisy iray “The Kinks” tany amin'ny taona 70 tany (izay mpirahalay ihany koa no namorona azy tamin'izany) .
Nivoaka tamin'ny Desambra 02013 ny rakikira voalohany « Môla Kely » ary miresaka ny hasarotry ny fiainana ao Antananarivo, ny fahantrana raiki-tampisaka sy ny kolikoly tsy mitsaha-mitombo. Ny iray amin'ireo ampahany tena fitaratra,Vangy, no anehoan-dry zareo ny hatezerany manoloana io andavanandrom-piainana manahirana io, arahan'ny tsindrom-paingotra kely hatrany:
Inona moa izany no tena hiasàna mafy, tsy misanda mihoatra ny 3000 Ariary akory ianao, tsy vidinà mpampanofa vatana iray akory aza izany.
Tantarain'i Eddy ny antony mahatonga ny rock-mpanoherana ho toy ny fomba lojika hamaritana ny toedraharaha ao Madagasikara :
Tsy asa fivelomana ny fiangaliana rock ao Madagasikara, fa raha ny marina dia toy ny ady maharitra aza. Voalohany, eny an-dàlana, voatangon'ireo polisy hatrany ianao, miainga amin'ny teboka A ho amin'ny teboka B. Avy eo, raha te-hilalao ianao, tsy manana safidy. Tsy maintsy mandalo amin'ny ambany gorodona ary mifikitra tsara. Any anatin'ireny toeram-pisotrosotroana amin'ny alina ireny ianao no milalao, anaty cabarets tsy dia manao ahoana loatra.
(2014) Voasivana tao Madagasikara:
Tsy hoe namana ihany no azon'ilay tarika avy amin'ireo tononkira fitakiana sy manindrona ireo. Hazavain'i Eddy ireo olana nosedraina tany an-tanindrazana :
Tsy nandeha tamin'ny onjampeo velively mihitsy, na tany amin'ireny trano fanaovana fampisehoana ireny, satria natahotra loatra tsy te-hanana olana aorian'ny fandalovanay ireo mpitantana. Vitanay ihany anefa ny niaka-tsehatra tany anaty trano fisotroana. Ary tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy no tena nampahafantatra ny aminay izahay.
Mahefa manampy hoe :
Raha toa ianao tojo olona mahafinaritra mpikarakara lalonana faran'ny herinandro, dia mitovy amin'ny 100 euros eo no omena anao ho an'ny tarika iray manontolo. Fa ny mitranga matetika dia tojo patirao mamo ianao. Amin'ny voalohany dia avelany hiakatra sehatra ianao. Misy fotoana avy eo izy mihitsy no tonga eny ambony sehatra mandaka sy mandroaka anao raha vao tsy mahafaly azy izay voalaza ao anatin'ny mozikanao. Efa niainana matetika ny toejavatra somary jiolahimboto tahaka izany. Nipetraka niaraka tamin'ny mpangataka, ekena, saingy tsy nanakana anay hifofotra izany. Koa ankehitriny, na inona na inona hanjo anay, efa matevin-koditra ny aty.
Fahombiazana any ivelany : Ny “Festival des Trans Musicales” tao Rennes (2015) sy ny Le Petit Journal (2016)
Ananan'ny endrika mozika voizin'ny The Dizzy Brains daholo ny zavatra rehetra natao hahaliana ny talen'ny Festival des Trans Musicales tao Rennes, Jean-Louis Brossard :
Miangaly rock izany ireto bandy kely ireto. Resy lahatra aho fa ho ataon-dry zalahy ireto mirehitra mihitsy. Satria ny rock, na izay voiziny ho fanoherana zavatra iray, efa somary very an-dàlana ny dikany aty amin'ny firenentsika tandrefana. Kanefa any amin'ny firenen-dry zareo, any Madagasikara, misy dikany ny zavatra hirainy. Tena teraka avy any an-dalambe tokoa!
Nataon-dry am-paosiny ireo bretons mpijery tamin'ny alàlan'ny fiakarana sehatra niaraka taminà saina breton. Ampahany tamin'ny fampisehoana :
Volana vitsivitsy taty aoriana, nataon'ny The Dizzy Brains nihovitrovitra ihany koa ireo mpijery ny “Printemps de Bourges”. Ary mazava loatra, ny faratampony tamin'ny fisehoany ilay tao amin'ny fandaharana “Le Petit Journal”. Miaraka amin'ny tsy firaharahian'ireo izay tsy ho very na inona na inona, nandritry ny ora iray izay nahabe ny mpijery sy mpihaino dia tamim-pamiràtana tokoa no nihiràn'ilay tarika, ary nahavoafitaka ilay mpanolotra, Yann Barthès, tamin'ny fomba fitenin-dry zareo mivantambantana.
Manohy ny fitetezany an'i Eoropa ny tarika, ary antenain'ireto tanora mpiangaly mozika ireto ny ho afaka hanohy hanentana izao tontolo izao momba ny toedraharaha ao Madagasikara.